किन बटुल्दैछ कान्तिपुरले विद्यार्थीका मोबाइल नम्बर? – Media Kurakani
June 28th, 2015 Media Kurakani Feature Stories
तपाईँलाई सुरुमै जानकारी दिउँ, २०७१ सालको एसएलसी परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्न स्वीकृति पाएका नौ वेबसाइट मध्ये कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको इकान्तिपुर डट कम पनि एक हो। यसले नतिजा हेर्नका लागि छुट्टै पेज नै बनाएको छ।
तर अचम्मको कुरा के छ भने अरु वेबसाइटमा रिजल्ट हेर्न परीक्षार्थीको सिम्बोल नम्बर भए पुग्छ तर इकान्तिपुरमा भने मोबाइल नम्बर पनि चाहिन्छ।
इकान्तिपुरको होमपेजको दाहिने पट्टी रिजल्ट पेजको लिंक अझै देखिन्छ। (हेर्नुस् रातो घेरामा)
रिजल्ट पेजमा जानुअघि इकान्तिपुरको ‘नेपाली’ मा जाउँ, नेपाली पेजमा रिडाइरेक्ट हुनुपूर्व पनि एसएलसी रिजल्टकै लिंक आउँछ।
रिजल्ट पेजमा गएपछि नाम, मोबाइल नम्बर र सिम्बोल नम्बर हाल्ने अप्सन छ। हेर्नुस् स्क्रिनसटः
रिजल्ट हेर्न सिम्बोल नम्बर भए पुग्छ तर कान्तिपुरले किन विद्यार्थीको नाम र मोबाइल नम्बर किन मागिरहेको छ?
कान्तिपुरलाई खुला प्रश्नः किन बलुट्दै छ कान्तिपुरले विद्यार्थीको मोबाइल नम्बर? विद्यार्थीको मोबाइल नम्बर संग्रह गर्नुको प्रयोजन के हो? र अर्को कुरा कान्तिपुरले मोबाइल नम्बर बटुल्न थालेको यो पहिलोपटक होइन। पोहोर पनि कान्तिपुरले यसरी नै रिजल्ट हेर्नका लागि मोबाइल नम्बर हाल्न लगाएको थियो। पोहोरसाल इन्ट्री भएका मोबाइल नम्बरहरु कान्तिपुरले के गर्‍यो होला? कि विज्ञापन वा अन्य व्यवसायिक प्रयोजनका लागि विक्री भए?
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शैक्षिक प्रदर्शनीका बेला पनि यसरी नै मोबाइल नम्बर बटुलिन्छ। पछि ती मोबाइल नम्बर कहाँकहाँ पुग्छन्, कहिल्यै सोच्नुभएको छ?
नेपालको ‘नम्बर १’ मिडियाले बिनाप्रयोजन मोबाइल नम्बर बटुलेको त होइन होला। कि कसो?
Tags eKantipur Kantipur Kantipur Publications Privacy SLC Result
माउन्टेन टिभीमा भएको सहमतिका ७ बुँदा यस्ता छन् »
« रेडियो स्क्रिप्ट कसरी लेख्ने? शब्दले भाव र स्वरले भावना बोल्न सक्नुपर्छ
रिजल्ट हेर्दा मेराे नम्बर पनि लिएको थियाे। पछि त्याे नम्बर इकान्तिपुरले अाफ्ना विज्ञापनदाता कलेजहरुलाइ बेचेछ। अहिले एड्मिसन सुचनाका SMS पठाएर हैरान छ। उसकाे स्पाेन्सर किस्ट कलेजबाट बढी SMS अाएका छन्। एउटा कामका लागि भनेर माग्ने अनि विज्ञापनदातालाई अर्को प्रयाेजनका लागि बेच्नु मिडिया इथिक्सभित्र पर्छ पर्दैन हाेला?
किस्ट कलेज उच्च माविले सौजन्य गरेको हो। यो रिजल्ट उसलाई विद्यार्थी बोलाउनको लागि सजिलो होला भनेर मोबाइल नम्बर जम्मा पारेको होला नि।